Diana ကိုသူမကိုယ်သူမအသွင်ပြောင်းပြီးသူမအခွံမှထွက်ခွာရန်ချားလ်စ်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့သည် - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Diana ကိုသူမအခွံထဲကအသွင်ပြောင်း။ ထွက်လာရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပုံ။
ဒိုင်ယာနာ et ချားလ်စ် 1981 ၌သူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအစကတည်းကအထူးသဖြင့်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ သူသည်ရာဇပလ္လင်ရှေ့ရှေ့တွင်ရှိနေပြီးသူသည်မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၌အမှန်တကယ်မရှိခဲ့ဖူးသည့်ငယ်ရွယ်သည့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဆရာမတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းကြေငြာသည့် အချိန်မှစ၍ တစ်နေ့တွင်မိဖုရား၏စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာသောကြောင့်သူမသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်ဤရုတ်တရက်ကျော်ကြားမှုကိုအလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံအမြင့်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဘီဘီစီရေဒီယို4၏ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်ပုံများတွင် Diana မှအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကမ္ဘာ့ကြယ်ပွင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပုံကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
သူမသည်နို ၀ င်ဘာလ 1985 တွင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်သမ္မတရော်ဂျာ၏ရှေ့မှောက်အိမ်ဖြူတော်ရှိနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် John Travolta နှင့်အတူကခုန်ခဲ့သည်။
မစ္စ Kaplinsky ကပြောကြားသည်မှာ“ အမေရိကန်သမ္မတ၏ရှေ့မှောက်၌ကခုန်ခြင်း။ အိမ်ဖြူတော်၌ထ။ ကခုန်ရန်သတ္တိရှိဖို့လိုသည်။
ဒိုင်ယာနာရဲ့အတိတ်ကိုနောက်ကွယ်မှာအသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့ဒီယာနာရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ကသူမအတွက်ဒီယုံကြည်မှုအသစ်၊ အသွင်အပြင်သစ်၊ ဒီဒိုင်းနမစ်အသစ်ကိုလား။ "
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာနဲ့မင်းသားချားလ်စ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
အတ္ထုပ္ပတ္တိဆရာစာရာဘရက်ဖို့ဒ်က“ ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တာငါမထင်ဘူး။ ထိုအချိန်တွင်ချားလ်စ်သည်သူမနှင့်အိပ်မပျော်တော့ပါ။
"မင်းကသူ့ကိုဘာလို့ချစ်တာလဲ။ ဟုတ်တယ်ပြောတယ် သူကဒီစိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်။
သူ၏တုံ့ပြန်မှုမှာမိမိကိုယ်ကိုပရောဂျက်လုပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုနိုင်ငံတကာမှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တွေအထင်ကြီးခဲ့ကြထင်ပါတယ်။ "
မစ္စ Kaplinsky ကဆက်ပြောသည် -“ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရိုးသားကြပါစို့။
ဆက်ဖတ်ရန်: Meghan ၏ Diana Style TV အင်တာဗျူးသည်ဘာကြောင့်ပြProbleနာဖြစ်သနည်း။ မိဖုရား
ဒိုင်ယာနာအသွင်ပြောင်း (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ဒါပေမယ့်ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြသမှုကတော်ဝင်မိသားစုကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်မဟုတ်လား?" ဒါဟာလုပ်ဖို့အလွန်တော်ဝင်အရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "
မစ္စဘရက်ဖို့ဒကမစ္စတာဘရက်ဖို့ဒ်က“ Charles ရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ငါထင်တယ်။ ဒီကိစ္စကိုမိဖုရားကဂရုမစိုက်ဘူး။ "
Diana ဒီဇိုင်နာအဲလစ်ဇဘက် Emmanuel ကတော့သူမရဲ့အသွင်ပြောင်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ သူကရှင်းပြသည်မှာမင်္ဂလာဆောင်မတိုင်မီလေးတွင် Diana သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမတိုင်မီသူမ၏ကိုယ်အလေးချိန်များခဲ့သည်။
မစ္စ Emmanuel ၏အဆိုအရသူမသည်သူမအပေါ်ယုံကြည်မှုအားပြောင်းလဲသွားစေသည့်ပုံသဏ္"ာန်ရှိသောတံတားပုံစံဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာကပန်းရောင်တောက်ပပြီးဘောလုံးကိုတက်ကြွစေမှာပါ။
ထို့နောက်သူမကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ - "သူမဟာလှပပြီးသူမတစ်ယောက်တည်းရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုတာသူခံစားခဲ့ရတယ်။ သူမမှာတစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်။ လူတိုင်းကသူမ ၀ တ်နေတာကိုကြည့်ချင်တယ်၊ အဲဒါကသူ့ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ "
Imran Khan ၏ Diana ၀ န်ခံချက်ကိုဝီလျံ၊ [Insight]
ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - မင်းသမီးဒိုင်ယာနာသည်တစ်ခါမျှမအောင်မြင်ခဲ့ဖူးသောနှလုံးကြေကွဲဖွယ်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည် [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် ၂ သည်ဘုရင်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် [ပာ]
Wales မင်းသားနှင့်မင်းသမီး 1982 တွင်လက်ထပ်ခဲ့သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဒိုင်ယာနာနှင့်ချားလ်စ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးတွင်အစောပိုင်းကပြproblemsနာများရှိခဲ့သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
သူမကဆက်ပြောသည်မှာ“ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ၊ ယုံကြည်မှုရှိလာတာ၊ "
မစ္စ Kaplinsky က“ Diana ရဲ့ပုံရိပ်က Charles အပေါ်မှာပျံနေတယ်” ဆိုသည့်ဓာတ်ပုံကမှတ်ချက်ချသည်။
Diana ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Charles သည်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်မှုမရှိကြောင်းများစွာသောသူတို့သတိပြုမိကြသည်
Diana သည်မစ္စတာထရာဗိုလ်နှင့် Diana အပြီးတွင်နောက်တစ်ရက်တွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
သူတို့က 1992 သို့ကွဲသွားတယ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
Mme Kaplinskyaajouté:" Charlesaété vexé par la popularité de Diana et ça se voit. "
Mme Bradfordaajouté:" Absolument, il était habitué à être numéro un et il savait qu'il n'en était plus un. »
En vieillissant, Diana s'est imposée comme une figure incontournable. Elle s'est alors lancée seule pour représenter diverses causes caritatives. Elleapeu à peu parlé davantage de son mariage difficile, ce qui l'a éloignée du reste de la famille royale etaabouti à son divorce avec Charles en 1996.
Elle est décédée tragiquement un an plus tard, des suites d'un accident de voiture. 